Dowladda Qatar oo Diplumaasi Sare usoo magacaawday Soomaaliya iyo Amiirka oo amray in….. – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Doha (Mareeg News) Amiirka Dalka Qatar Tamiim Bin Xamad Al-thani oo Maantas oo saaray Wareegto rasmi ah ayaa dalka Soomaaliya usoo magacaabay Safiir heerkiisa sareeyo kaasoo lagu sheegay inuu yahay Safiir aan caadi aheyn Ambassador Extraordinary- سفيرا فوق العادة).
Safiirkaan loo soo magacaabay Soomaaliya ayaa lagu magacaabaa Xasan Xamza Asad Haashim wuxuuna Soomaaliya ka qaban doonaa danaha dalka Qatar.
Amiirka ayaa war saxaafadeedkiisa ku sheegay in magacaabistaan ay dhaqan galeyso Maalinta lasoo saaro wareegtaan oo ku beegan Maanta, wuxuuna amray in lagu daabaco wargeyska Qaranka iyo in lagu baahiyo Raadiyaha iyo Tv-ga dowladda leedahasya.
Dowladda Qatar ayaa Soomaaliya la gashay heshiisyo ay kamid tahay inay dhisto waddooyinka isku xiro Jowhar iyo Muqdisho, Shabeelada hoose iyo Muqdisho.
Sidoo kale waxaa mashaariicda Qatar laga sugayo kamid ah inay dayactir ku sameyso Xarunta Xisbiga oo saldhig u noqon doonto Ra’isulwasaaraha dalka Soomaaliya.